राष्ट्र बैंकले किन रोक्यो बोटलर्स नेपालको लाभांश ? « Lokpath
२०७७, १५ पुष बुधबार १५:४५
राष्ट्र बैंकले किन रोक्यो बोटलर्स नेपालको लाभांश ?
प्रकाशित मिति : २०७७, १५ पुष बुधबार १५:४५
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलाको नेपालका लागि बोटलिङ तथा व्यापारिक कम्पनी बोटलर्स नेपाललाई लाभांश लैजान रोक लगाएको छ ।
‘बोटलर्सले लगानीको लेखाङ्कन नै गराएको छैन, त्यसैले लाभांशको स्वीकृति नदिइएको हो ।’ राष्ट्र बैंक स्रोतले लोकपथलाई बतायो । लेखाङ्कन नगराएको कारण कतै न कतै चलखेल भइरहेको छ भन्ने लागेपछि राष्ट्र बैंकले लाभांश लैजान रोकेको स्रोतको दाबी छ ।
वैदेशिक लगानीसम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार राष्ट्र बैंकमा लेखांङ्कन नगराएसम्म सो लगानीबाट प्राप्त गरेको नाफा आफ्नो देशमा फिर्ता लैजान नपाउने व्यवस्था छ । स्रोतले भन्यो, ‘बोटलर्सले लेखांकन नै नगराएका कारण लगानीकर्ता को हो भन्ने नै अन्योल भएको छ ’ ।
बोटलर्सको शेयर शंकास्पद रुपमा किनबेच भएको राष्ट्र बैंकले अध्ययनका क्रम फेला पारेको छ । जसका कारण लगानी सम्बन्धी लेखाङ्कन नगराएको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ । ‘कुन कम्पनीको लगानी हो भन्ने नै अन्योल भएपछि कसरी लाभांश लैजाने स्वीकृति दिने ?’ राष्ट्र बैंक स्रोतले थप प्रस्ट पार्‍यो।
बोटलर्सको ७६ प्रतिशतभन्दा बढीको शेयर स्वामित्व किनबेच भएको तर त्यसको सम्पूर्ण विवरण राष्ट्र बैंकमा नबुझाएका कारण राष्ट्र बैंकले लाभांशमा रोक लगाएको हो । अनुसन्धानका क्रममा शंका लागेपछि दुई वर्ष अघि कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले सो कम्पनीका थप जानकारी माग गर्दै पत्राचार समेत गरेको थियो । तर सो कम्पनीले आश्यक जानकारी बुझाउन नसकेपछि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि लाभांश लैजान रोक लगाइएको छ ।
अख्तियारका तत्कालीन आयुक्तलाई ७० लाख घुस दिने न्यौपानेले अदालतमा ३५ लाख धरौटी बुझाउन नसकेपछि…
काठमाडौँ– नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने कारागार चलान भएका छन्। जिल्ला